IATA: Ubunzima kakhulu kwindlela imida evulwa ngayo kwakhona
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IATA: Ubunzima kakhulu kwindlela imida evulwa ngayo kwakhona
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Oktobha 4, 2021
UWillie Walsh, uMlawuli-Jikelele we-IATA
Izithintelo zokuhamba kumazwe aphesheya kunye nasekhaya ziyinkimbinkimbi kwaye ziyabhidisa imigaqo yemithetho ngokungaguquguquki okuncinci phakathi kwabo.
Izithintelo zokuhamba zithenge oorhulumente ixesha lokuphendula kwiintsuku zokuqala zobhubhane we-COVID-19.
Kwiinyanga ezidlulileyo, iimarike eziphambili ebezivaliwe ngaphambili zithathe amanyathelo okuvulela abahambi abagonyiweyo.
Phakathi kweemarike ezazivaliwe ngaphambili, iYurophu yayihamba phambili, ilandelwa yiCanada, i-UK, i-US kunye neSingapore.
Ihlabathi Umbutho wezoThutho loMoya (IATA) ibize ukuphela kwezithintelo zokuhamba ze-COVID-19 ezingavumi ukubuyisela ukuthuthwa komoya. Ikhuthaze oorhulumente ukuba basebenzise oorhulumente abenziwe lula ukulawula umngcipheko we-COVID-19 njengemida evulekileyo kuhambo lwamanye amazwe.
“Izithintelo zokuhamba zathenga oorhulumente ixesha lokuphendula kwangexesha lobhubhane. Phantse iminyaka emibini kamva, eso sizathu asisekho. I-COVID-19 ikhona kuzo zonke iindawo zehlabathi. Izithintelo zokuhamba ziyinkimbinkimbi kwaye ziyabhidisa imigaqo yemithetho ngokungaguquguquki okuncinci phakathi kwabo. Kwaye akukho bungqina buncinci bokuxhasa ukuthintelwa kwemida okuqhubekayo kunye nokudodobala kwezoqoqosho abakudalayo, ”utshilo UWillie Walsh, uMlawuli-Jikelele we-IATA.
Iziphumo zovavanyo lokufika kwabakhweli base-UK zibonisa ukuba abahambi abongezi mngcipheko kubemi bendawo. “Kwizigidi ezithathu zabantu abafikayo phakathi kukaFebruwari no-Agasti ngama-42,000 kuphela abavavanywe benesifo-okanye bengaphantsi kwama-250 ngosuku. Okwangoku, inani lemihla ngemihla e-UK ngama-35,000 kwaye uqoqosho-ngaphandle kohambo lwamazwe aphesheya-luvulekile. Abantu kufanelekile ukuba bahambe ngokukhululeka, utshilo uWalsh.
Kwiinyanga ezidlulileyo, iimarike eziphambili ebezivaliwe ngaphambili zithathe amanyathelo okuvulela abahambi abagonyiweyo. Phakathi kweemarike ezazivaliwe ngaphambili, iYurophu yayihamba phambili, ilandelwa yiCanada, i-UK, i-US kunye neSingapore. Nditsho ne-Australia, enezona zithintelo zibalaseleyo, ithatha amanyathelo okuvula imida yayo kwakhona kubahambi abagonyayo ngoNovemba.
IATA ixhasa ezi ntshukumo kwaye ikhuthaza bonke oorhulumente ukuba baqwalasele le nkqubo-sikhokelo ilandelayo yokuvula kwakhona imida:
Izitofu zokugonya kufuneka zenziwe zifumaneke kubo bonke ngokukhawuleza okukhulu.
Abahambi abagonyelweyo akufuneki bajongane nayo nayiphi na imiqobo kuhambo.
Uvavanyo kufuneka lubenze abo bangenakho ukufikelela kwizitofu ukuba bahambe ngaphandle kokuvalelwa.
Uvavanyo lwe-Antigen sisitshixo kulawulo olungenaxabiso kunye nolulungeleleneyo.
Oorhulumente kufuneka bahlawule ukuvavanywa, ngoko ke ayibi ngumqobo kuqoqosho ekuhambeni.
Page 1 of 3 Edlulileyo Okulandelayo
I-Breeze Airways iqala kwakhona eNew Orleans ngenqwelomoya ...
I-Omega Drill yakwaSirayeli ifanisa ukuqhambuka kwento entsha...
Ihotele yeParadise Sun ngoku ibango iSeychelles eZinzileyo...
Isiqingatha sabahlali base-UK baceba iihambo ezininzi kulo nyaka uzayo
Orlando ukuya eNassau. Inqwelomoya eNtsha yeFrontier Airlines
IProCare yezeMpilo efunyenwe yiClingence Holdings
Abantu abangagonywanga bavalwe kwiindawo ezininzi zikawonke-wonke e...
Akukho sithuba sodwa: U-Abu Dhabi uvula ukuze ugonywe ngokupheleleyo ...
Umgca weHolland waseMelika uqalisa iXesha lokuhamba ngenqanawa ukuya...
IATA isungula isiqinisekiso esitsha sebhetri ye-lithium
Iinqwelo-moya zase-Ethiopia zityholwa ngezixhobo ezingekho mthethweni ...
I-Austria ixabanisa ii-Eurofighters zokuthintela ...
Inqwelomoya esuka eRhawutini isiya eKapa eMzantsi Afrika ...
Ukunqunyulwa komsebenzi wabakhweli e-UK kunika amandla amatsha kumoya wasekhaya...
UKhenketho lomtshato: Ukuphefumlela uBomi obutsha kuHambo kunye...
Inkxaso karhulumente ibalulekile kuphapho lwekhabhoni entsha...
IHawaii Ibhengeza iziKhokelo eZitsha zeHlabathi...
UKirsten Baete waseNebraska Uphumelele iSanti eziMhlophe zabaseTyhini...
Impembelelo epheleleyo yeBrexit kuhambo lwehlabathi ayizange...
INkqubo ye-COVID-19 yoLawulo esungulwe yiNkulumbuso ...
Isitofu sokugonya seModerna COVID-19 simisiwe eJapan emva kokubini ...
UMphathiswa wezoKhenketho eJamaica: iLizwe elitsha lezeMpilo kunye...
I-Hispanics ichithe i-113.9 yezigidigidi kuhambo lwasekhaya kwi ...
IJamaica Yamkela iNkonzo eNtsha evela kwiAmerican Airlines
INkanyamba uOlaf ibeka iliso layo eMexico
Iqela leBloomwell lifumana inkxaso-mali enkulu yembewu ...
INorway iphelisa zonke izithintelo ze-COVID-19, ibuyela kwi ...
I-75% yeSt Kitts kunye neNevis ekujoliswe kuyo kugonyiwe abantu
UVienna ugqiba kwelokuba agcine usodolophu owuthandayo uAdolf Hitler
I-Kingston Jamaica ngoku ikuLuhlu lweeholide eziPhezulu zika-2022...
I-Airways yoMzantsi Afrika kunye neqabane lase-Emirates eMzantsi ...
IBrussels Airlines iveza uphawu olutsha lwesazisi
Iinqwelomoya ezisuka eAlmaty zisiya eNew Delhi ngeAir Astana ngoku
Ingqungquthela yaseBarcelona ichaza ikamva elizinzileyo le...
Uhlaselo lobunqolobi e-Oslo: Ipolisa lenzakele, lixhobile...
Iqhawe le-WTN lokuKhokela uKhenketho lweBarbados: UJens Thraenhart ...
IJamaica Blitz kwiiMarike zeHlabathi: Uhlaziyo olusemthethweni ngu...
Wowu! Kungcono ubhukishe inqwelomoya yakho yaseLufthansa esuka eYurophu isiya ...
Ngubani oyena Mntu unamandla kwintengiso...
Iihelikopta eIndiya: Kungcono kwiziseko zophuhliso kunye ...
Izikhokelo zoBumelwane: Izinto ezili-10 onokuthi ungazazi...
Abantu abangama-45 basweleke kwingozi yebhasi yaseBulgaria
Umsebenzi ophambili weTekhnoloji kunyaka ozayo kukunyusa ingeniso